Iindlela zokuThengisa iziQulatho zeB2B | Martech Zone
Ubhubhane uphazamise kakhulu iindlela zentengiso zabathengi njengoko amashishini ehlengahlengisa kwizenzo zikarhulumente ezithathiweyo ukuzama ukuthintela ukusasazeka okukhawulezileyo kwe-COVID-19. Njengoko iinkomfa bezivaliwe, abathengi be-B2B bahambisa i-intanethi kumxholo kunye nezixhobo ezibonakalayo ukubanceda Amanqanaba ohambo lomthengi we-B2B.
Iqela elikwiNtengiso yeDijithali kwiiPhilippines libeke ndawonye le infographic, Iindlela zeNtengiso ye-B2B kwi-2021 eqhuba ikhaya leendlela ezi-7 eziphambili kwindlela abathengisi bomxholo we-B2B abaphendule ngayo kwimizi-mveliso nakwinguqu kwindlela yokuziphatha:
Umxholo ujolise ngakumbi Ukwahlulahlula kunye nokwenza ubuqu kube yinto ephambili njengoko abathengisi bajonge ukubonelela ngamava ekujoliswe kuwo. Ulawulo lokuqukethwe kunye namaqonga entengiso ezenzekelayo kunye nobukrelekrele bokufakelwa kubonelela ngetekhnoloji eyimfuneko yokuvelisa kunye nokulinganisa la mava kujoliswe kuwo.
Umxholo uya unxibelelana ngakumbi kwaye unamava - iaudiyo, ividiyo, oopopayi, iikhalityhuleyitha, i-gamification, inyani eqinisekisiweyo, kunye nenyani yokwenyani inyusa amava omthengi we-B2B… ukubanceda bakhokelele kuguquko.
Ukusetyenziswa koMxholo ngeFowuni yokuqala -Akwanelanga ukwakha indawo ephendulayo ebonakala kwisixhobo esiphathwayo emva kokwakha umbono wedesktop. Ngakumbi nangakumbi ii-cmopanies zitshintsha ngamandla umxholo kunye namava abaza nawo kubakhenkethi abahambahambayo.
Ukuthengisa umxholo kumajelo aliqela -Ukudibana neendwendwe apho zikhona kuya kubaluleka njengoko abathengi be-B2B banezixhobo ezingapheliyo. Ukuba umthengi wakho ukwisiteshana sentlalontle, ukunxibelelana nabo kubalulekile. Ukuba zikwisandi (umz. Ipodcast), ukubonelela ngolwazi apho luyimfuneko. Ukuba bakwividiyo, umxholo wakho unokufuna ukuba kwiYouTube ngokunjalo.
Ukuthengisa umxholo ulawulwa ligunya leengxoxo -Imijelo engapheliyo yomxholo ayisebenzi njengoko iinkampani zikhangela ukwakha esembindini, ilayibrari yomxholo ebanzi ezibonelela ingcali, umxholo ogunyazisiweyo nothembekileyo kubathengi abanokubakho njengoko besenza izisombululo kwimingeni yabo yeshishini.
Intengiso yokuQulwayo yokuSebenza kweQabane -Ukuxhamla ubudlelwane kunye nomxholo wokukhuthaza umnqamlezo kunye nabantu ekujoliswe kubo yindlela efanelekileyo nesebenzayo yokuqhuba iziphumo zeshishini.
UkuThengiswa kweMxholo njengeNkonzo eXhaswe ngaphandle - Ngaphezulu kwesiqingatha sazo zonke iinkampani ze-B2B ezikhuphele ngaphandle umxholo wazo-ziqesha iingcali ezinophando, uyilo, ukubhala kunye nokwenza izinto ezinokubakho ngaphakathi.
Ukunceda iimveliso ze-hyperfocus kunye nokuphuhlisa izicwangciso zokuthengisa umxholo kuwo onke amajelo kunye nemimoya ngumsebenzi endiwuthandayo kunye nabaxumi. Iinkampani ezininzi kakhulu zinomkhondo womxholo oswele nasiphi na isicwangciso esiliqili sokuqhuba iziphumo ezizizo zeshishini. Inkqubo ye- tshiza uthandaze indlela yophuhliso lomxholo (umz. X izithuba zebhlog ngeveki) ayilincedi ishishini lakho… kukudala ingxolo nokudideka.
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba ufuna uncedo. Sincede amashishini amancinci e-B2B ngokusebenzisa iinkampani zeshishini ukuba ziphuhlise iindlela zazo zokuthengisa umxholo ukuqhuba iziphumo ezinokulinganiswa. Ayisiyo inkqubo elula, kodwa ineziqhamo ezimangalisayo njengoko ishishini lakho likwazi ukwakha ukungaguquguquki kunye nenjongo emva kwawo wonke umxholo abawuphuhlisayo, abawuhlaziyayo, kunye nokuphindaphinda.
Nantsi i-infographic epheleleyo evela kwiNtengiso yeDijithali kwiiPhilippines:
tags: amanqakuegunyazisiweyob2bUmthengi we-b2bb2b zigaba zomthengiUmxholo we-b2bUkuthengisa umxholo we-b2bb2b umxholo wentengisob2b umxholo wentsingiselouhambo lwabathengiumnxeba kwisenzoilayibrari yomxholoUkuThengiswa kweMpahlacopywritingukwazisaukufunyanwa kwabathengiubungqina babathengiuyiloingcaliubuchulekwi-infographicisizukulwana esikhokelayoumxholo weqabaneIidemo zemvelisoukubalulekauphandoImidiya yokuncokolaubunkokeli bokucingathembaukuthembekandiphilawhitepapers
Sep 10, 2013 ngo-10:49 PM
Ndingathanda ukwabelana ngoku nabanye oogxa bam kwi-G plus. Ngokuqinisekileyo oku kwakuya kubanceda. 🙂